> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachi iPhone si iPad ndabere
Chọrọ weghachi gị iPhone si iPad ndabere? Echegbula. Dị ka ogologo oge ị na synced gị iPad na iTunes, gị iPad data na-n'enweghị echekwa na nchekwa data na faịlụ usoro. Ị adịghị mkpa na-ala n'iyi ukwuu oge dịghachi iPhone si iPad ndabere faịlụ na iTunes, na a-atọ ndị ọzọ na-eweghachiri ngwá ọrụ, ị nwere ike iweghachi iPhone na iPad ndabere faịlụ na 2 nzọụkwụ, ọ dịghị ajirija.
3 nzọụkwụ iji weghachi iPhone si iPad ndabere faịlụ
Nke mbụ niile, gị mkpa iji na-enweta nnyemaaka ngwá ọrụ ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (n'ihi na Windows ọrụ) (ọhụrụ akwado iOS 9). Nke a na usoro bụ 100% pụrụ ịdabere na irè. Ị nwere ike iji ya weghachi gị iPhone ọ bụla na iPad ndabere, na ịhụchalụ ọdịnaya na nkọwa tupu ị weghachi, ị na-ekpebi onye ị chọrọ. E wezụga iPad ndabere faịlụ, ọ na-enye gị ohere iji weghachi gị iPhone na iPod aka ndabere ma ọ bụ ndị ọzọ iPhone ndabere.
Download free ikpe mbipute a software n'okpuru na wụnye ya na gị Mac.
Ọzọ, ka na-agbalị iji weghachi iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus / 6/5 / 4S / 4 / 3GS si iPad ndabere faịlụ na zuru ezu nzọụkwụ ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Wepụ gị iPad ndabere faịlụ
Na-agba ọsọ usoro ihe omume gị na Mac na-ahụ gị na iPad ndabere. Họrọ ya na pịa "Malite iṅomi" wepụ ọdịnaya maka preview.
Nzọụkwụ 2. Weghachi iPhone si iPad ndabere faịlụ
Mgbe adịrị, ị nwere ike ihuchalu niile dị n'ime gị iPad ndabere faịlụ. Akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha na gị na Mac n'ihi na gị iPhone weghachi.
Ugbu a, i nwere ike iweghachi gị iPhone si natara iPad ndabere faịlụ. Ọ bụ adịghị ike. Dị nnọọ mbubata ya na gị na iTunes na-akpali gị iPhone.